LinuxAdictos inobvunzurudza Chema Alonso chete | Linux Vakapindwa muropa
Chema Alonso anotipindura isu chete kune LxA
Isaac | | Kernel, Linux vs. Windows
Yedu kubvunzurudza svondo rino ndeyeimwe huru, mune ino kesi Chema Alonso ndiye akabatwa mibvunzo yedu. Iwe nemutsa wakada kutora nguva kuti utipindure isu chete, chimwe chinhu chatinotenda isu kuziva yako purogiramu.
Ndinofunga Chema Alonso, mumwe wevanonyanya kufarira nyika hackersIzvo hazvidi kuisirwa uye kunzwisiswa na "hacker" iro revo rechokwadi reizwi. Kune avo vasingamuzive, unogona kuwana zvakawanda nezvake nekuita googling uye ndinokukurudzira kuti uwane blog yake, kwaunowana zvinyorwa zvinonakidza nezve kuchengetedzeka. Unoziva Chakaipa-divi vakamirira iwe. Panguva ino, unogona kuverenga zvaakatipindura.
Linux Vanopindwa muropa: 1- Mubvunzo wekutanga unofanirwa… Pablo Motos, Jordi Évole, Mamen Mendizábal uye ikozvino ini. Chii chakaitika kwauri, Chema?
Chema Alonso: Ndinoedza kushandira munhu wese. Pindura kune ese emaemail uye mameseji. Ichokwadi kuti ini handipe zvakakwana. Ivo vanondiisira mameseji paTwitter, Facebook, Google+, Youtube, Instragram, iyo blog, email, nezvimwe, uye hazvigoneke zvachose kwandiri kuti ndiwane nguva yekuvapindura vese, asi ndinopika ndinoedza. Kana vari vatapi venhau, chokwadi ndechekuti ini ndaifanirwa kuve nevamwe vakanaka kwazvo muterevhizheni, asi vamwe zvakare vakanaka kwazvo mumapepanhau uye muInternet yenyika. Kana ndikawana nguva, ndinopindura mabvunzurudzo.
LxW: 2-ini ndinonzwisisa kuti wanga uri mudzidzisi weLinux uye panguva yebasa rako wakashanda nekuparadzirwa kweLinux. Chii chaunoda uye chii chaungade kuchinja nezvazvo?
AC: Hongu ndizvozvo. Ndanga ndiri mudzidzisi weGNU / Linux kwemakore mazhinji uye ndapa akawanda maRedHat makosi - ayo aive epamberi zvakanyanya mukupedzisira makore makumi mapfumbamwe -. Ini ndinoda nezve GNU / Linux kuti iwe unogona kuvaka zvinhu zvakawanda nemaitiro aya, modularity iriko kuti uzviite iwe nezvaunoda, uye huwandu hwezvishandiso zviripo. Kugovera neKali Linux, CentOS, Ubuntu kana Debian mienzaniso yekuti musimboti mumwechete ungashandurwe sei munzvimbo zhinji dzakasiyana. Ini handifarire chinamato icho vamwe vanozviti vane mahara software uye kushomeka kwemamwe maturusi ebhizinesi ekushandisa uye nharaunda dzevashandisi. Ikoko ini ndichiri kusarudza Microsoft Windows masisitimu kana OS X masisitimu.
LxW: 3-Semazuva ese, yakavhurwa sosi inomutsa tsitsi uye ruvengo. Vamwe vanofunga kuti haina kunaka kana kuti haina kuchengetedzeka pane yakavharwa. Chii chaungati kune avo vanofunga izvozvo?
AC: Chero chipi chezvirevo izvi, choga, chakashata. Chinhu chakakosha hachisi chekuti kodhi yakavhurwa kana yakavharwa, asi zvinoitwa nayo. Kune akajeka uye akashanda emahara software mapurojekiti, uye mamwe asiri iwo. Kufunga kuti chirongwa nekuti chiri OpenSource chiri kuzoongororwa nemunhu wese hachisi chokwadi. Iwe unofanirwa kuita zvakawanda kupfuura izvozvo. Zvakare, zvisinei nekuti une kodhi yekodhi zvakadii, kutsvagisa mabugs chinhu chinogona kungoonekwa kana kodhi yacho ikarongedzwa kune imwe dhizaini uye inomhanya mune imwe nharaunda. Ndokusaka nzira dzeFuzzing dzichishandiswa.
Kune rimwe divi, kushambadzira kodhi yekodhi uye yekuchengetedza matsva muOpen Source mapurojekiti kunovhura hwindo remukana wema 0days enjini dzekutsvaga kana zvasvika pakugadzira zviitwa pasati paine chigamba chinozvigadzirisa mune inoparadzirwa bhanari. Takazviona muzviitiko zvakawanda. Maonero angu ndeekuti, angave OpenSource kana kwete, izvo zvakakosha ndeye mhando yesoftware uye kana isu takaita software mumakambani edu kuitira kuchengetedzeka, pamusoro pekuiongorora zvakanaka, ndinofarira kuti iyo kodhi yekodhi inogara pamba}: ).
LxW: 4-Une yako 0xWord. Ndine mazita akawanda pamusoro pekuchengeteka kwako uye ndinokurudzira munhu wese kuti afambe famba pawebhu. Icho chakashomeka chitoro chemabhuku, nekuti iwe unopa mikana kune vanyori vatsva vanoda kutsikisa bhuku ravo pane chengetedzo kana mimwe misoro. Yemahara software zvakare inopa mikana yakawanda uye ini ndinofunga yakakosha kwedzidzo. Iwe haufunge here kuti makambani anovandudza software yezvako anofanirwa kufunga zvakare kuvhura kodhi yavo?
AC: Vazhinji vatove kutoita, asi ini handifunge kuti inofanirwa kuve yakawanda. Huge huwandu hwakaburitswa sosi kodhi hunowanikwa nhasi, chinova chikuru kudzidza rubatsiro. Ini ndinotenda kuti kambani inofanirwa kuvhura kodhi yayo mune mamwe mamiriro, asi handifunge kuti ndiyo inofanira kunge iri nzira chete. Zvinogona kunge kuti kambani diki inovhura yayo yemahara kodhi uye ipapo kambani hombe inotora mukana nayo nekuvandudza uye kuishandisa pasina iyo kambani diki inokwanisa kukwikwidza nayo. Ini ndinofunga kuti kune mudzidzi kana wehunyanzvi kugadzira yakavhurika sosi zvirongwa iri hombe tsamba yekuvhavha, uye kumakambani inogona kuve nzira yekugadzira nharaunda nekuisa zvirinani chigadzirwa, asi handiyo chete nzira.
LxW: 5-Uye kuunganidzwa kwemubvunzo wapfuura. Yedu blog inoitirwa kune yemahara software neLinux, asi isu tanga tichinyora zvakawanda nezve Microsoft munguva pfupi yapfuura. Akavhura mamwe emapurojekiti ake, zvimwe zvirevo zvaonekwa zvakatishamisa, vanovhura .NET Core uye Visual Studio Code yeLinux uye runyerekupe rwekuti yakavhurika-sosi Windows iri kukurukurwa mukati. Ungade here kuona yakavhurika sosi yeWindows?
AC: Microsoft yatove neyakawandisa sosi yayo yakavhurwa, uye inogona kuvhura zvimwe mune ramangwana. Pamwe vanozoisunungura yakavhurwa sosi mune ramangwana, asi handifunge kuti vachazviita munguva pfupi - pamwe ndakanganisa - Kusvikira nhasi, iyo Windows inoshanda sisitimu inoramba iine zvakawanda zvekutengesa kana ichienzaniswa nevakwikwidzi vayo, uye muchikamu chikuru imhaka yemabatiro avanoita zvinhu mukernel uye pane iyo inoshanda system dura. Mukana wekukwikwidza iwo wavanoda kumira kurwisa mamwe masisitimu akadai seApple, iOS kana OS X ane zvimwe zvinokwikwidza.
LxW: 6-Iri kumashure kweGumi neimwe nzira, kambani iri padhijitari chengetedzo inomuka kubva kuInformática 64 neTelefonica. Iyi yekupedzisira kambani, yaune hukama nayo, yakasarudza yeFirefox OS inoshanda sisitimu yemidziyo nhare. Iwe unofungei nezveFirefox OS uye ndezvipi zvakanaka zvaunoona pamusoro peIOS, Android, Tizen, ...?
AC: Kwete chete kuti ndine hukama neTelefonica, ndinoshandawo kuTelefonica. Iyo kambani yakagara yakazvipira kune mushandisi rusununguko rwekusarudza uye mambure kusarerekera. Uye nepo mamwe makambani achitaura nezvekusarerekera kwemambure kugadzira mabasa ane hunyanzvi hwakaenzana, ivo vanoita kuti masisitimu avo asashande pamwe zuva nezuva. Kufambisa hupenyu hwako hwedigital kubva kuIOS kuenda kuAroid kana kubva kuAroid kuenda kuWindows Runhare kurwadza. Hazvipindirane zvachose. Kuzvipira kwaTelefonica kutsigira yakafara uye isina kuvharwa ecosystem, ndosaka yakasarudza Firefox OS uye ichiramba ichitsigira. Mukana uyu ndewekuti kumashure kwayo kune Mozilla Foundation inogadzira ecosystem yeWebapps iyo inogona kumhanya pane chero system. Ndiwo mukana uyo "anopenga" weMozilla inoda kuwedzera.
LxW: 7-Ngatitaurei zvino nezve FOCA. Iyo inoshamisa software, asi kubva pakuona kwedu ine bhagi isina kugadziriswa. Haisipo yeLinux! Tinogona kuimhanyisa kubva kuWine, kuve nezvimwe zvishandiso kana neMetaShield Analyzer, asi isu tichiri kupotsa. Kune akawanda maturu ekushandisa pentesting, forensic ongororo, nezvimwe, zveLinux. Kune zvakare akawanda distros seKali, Parrot OS, Santoku, DEFT, uye Largo, nezvimwe. Linux hapana mubvunzo yakakosha kwazvo muchikamu chino. Sei wafunga kusatakura FOCA?
AC: Hatina kumbobvira taisa FOCA nekuda kwekushaikwa kwezve zviwanikwa, ikozvino tiri kufunga kuburitsa kodhi iri muNET uye kuti vanhu vafunge kana vachida kuiumbiridza yeLinux nechiziviso chitsva cheMicrosoft kana kuchivandudza zuva nezuva. Iwe uchafanirwa kumirira zvishoma.
LxW: 8-NEXT yakasarudza kugadzira Unix inoshanda sisitimu, iyo yaizozove hutachiona hweMac OS X apo Apple yakawana kambani. Unix zvirokwazvo iguru sisitimu uye Microsoft yakapfimbana nayo neXenix. Asi pakupedzisira Windows NT (OS / 2) yakaonekwa. Iwe unofunga kuti dai Windows anga ari * nix nhasi zvingave zvirinani?
AC: Kwete, kure nazvo. Microsoft haina "kutamba" neUNIX, Microsoft yakavaka XENIX iyo yakatengeswa kuSanta Cruz Operations, uye SCO UNIX yakave iyo yakanyanya kutumirwa UNIX pasi rose. IWindows kernel inoshamisa uye izvi zvinoratidzwa nehunhu uye chiitiko chevashandisi ve6x kernels.
Zvisinei, kufunga kuti iyo Windows kernel uye iyo UNIX kernel inosiyana zvakanyanya ... iko kukanganisa. Pane hurukuro huru yakanyorwa naMark Russinovich inonzi "A tale of two Kernels" kwaanotarisa izvo Windows NT tsanga neLinux kernels, uye zvinoshamisa kuti zvakadii chaizvo.
Muchokwadi, ini ndinoda chirevo Linux Torvalds akati makore apfuura kumusangano kwaakabvunzwa kuti nei vagadziri vekernel vaive nharaunda yakachinja zviso zvishoma uye ikaisa vashoma vanhu vatsva. Akataura kuti, pamusoro pekusava nharaunda inoshamwaridzika, iyo nguva yemhinduro dzakareruka kumatambudziko akareruka mukugadzira monolithic kernels makore apfuura.
LxW: 9-ndinogara ndichinzwa iwe uchiti iwe unofanirwa kushandisa antivirus. Kwete muWindows chete, asiwo mune mamwe mapuratifomu akadai seMac OS X. Vazhinji vanoti antivirus muLinux inoshanda chete kudzora komputa. Ndeapi mazano iwe aunopa linuxers nezve izvi uye ndeapi antivirus yaunokurudzira?
AC: Kana iyo nyaya iri yekudzora pasi sisitimu, bvisa iyo firewall, iyo dziviriro yeiyo yese inoshanda system ... uye unomhanya! } :)
LxW: 10 - Uye yekupedzisira ndiyo yakaoma kupfuura ese. Uku kwaive kubvunzurudzwa kwakaipisisa kwehupenyu hwako here? ; p
AC: Nooo, kure nazvo. Vauya kuzondibvunza zvisina maturo ... ndakamboudza mutapi venhau kuti: "Ndokumbirawo usandibvunze izvo zviri bhuru." Pane nguva dzandinonyora ivo mibvunzo yavanofanira kundibvunza kuti ndikwanise kutsanangura zvinhu zvazvino nenzira kwayo. Kana ndikaverenga….
Izvo zvinofadza kuva nevanhu vakaita saChema Alonso kune edu akateedzana mabvunzurudzo uye kuti, mukuwedzera, mune ino kesi inotiunzira nhau dzakanaka dzeramangwana uye izvo ndizvo pamwe isu tine FOCA yeGNU / Linux ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Chema Alonso anotipindura isu chete kune LxA
Basa rakakura, Linux Vakapindwa muropa: 3 kwaziso.
Zvakanaka, vanhu vazhinji vanofunga zvakapesana neiyi Telefónica mercenary uye muteveri akatendeka weTN kernels, uye ndiko kuti yakavhurwa sosi inobvumidza hunyanzvi uye shanduko yesoftware, uye kunyangwe hazvo ichiongororwa zvishoma, haina kudzikisira kusvika 0 -mazuva.
Chii chinoita kuti open source isanyanya kutarisana ne0days, kunyangwe isina kuongororwa zvakanyanya zvingave? Uye nenzira imwecheteyo ... chii chinoita kuti ive itsva uye inobvumidza shanduko yayo kana isina kuongororwa zvakanaka kana kuunza kufarira kudiki munharaunda? chikonzero chekutaura kwako.
Pindura kuna 111
Ini ndinofungidzira kuti inodaro nekuda kwe100% iyo inoshandisa yakavhurika kodhi kwete kana gumi% inofanirwa kuongorora kodhi yacho zvimwe kumba kana ukaiongorora asi iwe uchingoisa iyo gumi%.
Microsoft mercenary, kana iri nyaya.
Vachave Sek akadaro
Kuti Telefónica yakazvipira kusarerekera mumambure? Murege audze mukuru wake, César Alierta, kuti aone kuseka kwake (doro, hongu). Kubva kuna VaAlonso munhu haatarisiri kushoropodzwa kwakanyanya kwevashandirwi vake; zvisinei, hazvina kuoma kumuwana achiganhurana neupenzi kuvadzivirira. Neiyo yekuchengeteka kwakanyanya kwemaitiro akavharwa, ndinofunga achataura kune avo vemakambani akavimbika kana masangano, kwete Microsoft yake yaanoda (kana Apple, Google kana vamwe vazhinji) kune avo vane maitiro vachipesana nevatengi vavo zvave kazhinji unmasked (kubva kare pamberi pePRISM kusvika ikozvino, neruzivo rwunotumirwa neWindows 10, kunyangwe mutengi achizvigamuchira kana vachimaka zvese zvavasingaite)
Pindura Van ser Sek
Iwe unovhiringidza kuvanzika nemakomba ekuchengetedza (kukundikana kunouya) uye mukundikana IYO IYO IYO IYE IYO IVA NEZVIDUKU
Ichowo mhando chengetedzo gomba, ngazvive nemaune, zvekunze, nezvimwewo asi ndizvo.
Chema ndiye anotyaira tenzi!
Enda fanwin kubiridzira uku handiti? XD
Santi Hoyos akadaro
Makorokoto! kubvunzana kwakanaka kwazvo.
Pindura Santi Hoyos
Huya, chirevo cheMushandisi chingori chekare, mazuva ano kusaongorora kodhi kwakatungamira mukushushikana kwakawanda muna 2014. Dambudziko rekuremara raive pamusoro pemakore makumi maviri uye hapana akataura chero chinhu, zvakawanda zero Day kudzvinyirira izvo zvisina kuwanikwa nevatsvakurudzi vehunhu, vatove mumaoko emakambani uye matsotsi anozvitengesa kuzviremera zvenyika imwe neimwe, ipapo ngano yeakavhurika sosi inopera
Ini ndaive kumusangano kwaakapa chirongwa chake cheFOCA, uye akati akange akachipa zita iro nekuti zvisimbiso zvinodya mapenguin xD
Pindura kuna Franan
Ini ndinofunga antivirus mhinduro yakaipa kwazvo, kunyanya kune munhu anoonekwa seimwe yeakanakisa mune chengetedzo. Kuisa iyo firewall yekushandisa padanho reantivirus kupusa, mukuwedzera pakusapindura mubvunzo nenzira yakabatana, senge:
Kune munhuwo zvake, kushandiswa kweantivirus muLinux kunogona kurema, uye kusanyanya kushanda, zvisinei kukambani chinhu chakakosha chekuchengetedza.
Pindura kuna Lordsaeron
chisimbiso haana. sezvo chirongwa ichi chaimuziva asati aishandisa. yakanga yatoshandiswa kuongorora zvinhu mumetadata.
Pindura kuna alsormarcio
Ubuntu yatove nePPA yevatyairi veNVIDIA